Should you know how to cope with name-calling – အတ္တကျော်ရဲ့ စာပေါင်းစုံ
Should you know how to cope with name-calling
နာမ ပညတ် နာယူတတ်သော်
ကျွန်တော့်ကို မေမေက စိတ်လိုလက်ရရှိရင် “သား”လို့ခေါ်တယ်။ “သား” လို့ ခေါ်တာများတယ်လို့ပဲ ဆိုကြပါစို့ရဲ့။
အဖေကတော့ “သား”လို့ အတော်လေး ခေါ်ခဲတယ်။ ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ ခေါ်ခဲ့ဖူးတယ် ထင်ပါရဲ့။ ကျွန်တော်က ငယ်ဘဝကို အလိုလို မေ့လိုက်တဲ့ အငုံ့စိတ်နဲ့မို့ သိပ်ကောင်းကောင်း မမှတ်မိဘူး။ ကျွန်တော် သိသလောက် အဖေက ကျွန်တော့်ကို နာမည်ရင်းနဲ့ပဲ ခေါ်တာများတယ်။
ကျောင်းနေတဲ့ဘဝ ရောက်လာတော့ သူငယ်ချင်းတွေကလည်း နာမည်ရင်းအတိုင်းပဲ ခေါ်ကြတယ်။ လူကြီးတချို့က ကျွန်တော့်ကို “အာလူးကြော်”လို့ နာမည်ပြောင်ခေါ်ခဲ့ဖူးတယ်။ ခပ်ငယ်ငယ်တုန်းကပါ။
တချို့ကကျတော့လည်း ဘာလို့မှန်းမသိဘူး၊ ငယ်ငယ်ကတည်းက ကျွန်တော့်ကို “ဇာတ်လိုက်”လို့ ခေါ်ကြသေးတယ်။ အခုချိန်ထိလည်း အဲလို ရံဖန်ရံခါ အခေါ်ခံနေရဆဲပဲ။ အဲသလို အခေါ်ခံရတဲ့အခါမှာတော့ နည်းနည်း အူကြောင်ကြောင်နိုင်ချင်တယ်။ ဝမ်းပဲ သာရမလိုလို၊ စိတ်ပဲ ဆိုးရမလိုလို၊ ဘာမှန်းမသိဘူး။
ရှင်ပြုတဲ့အခါ ကိုရင်ဘွဲ့က “ရှင်အာစရ”တဲ့။ ကျွန်တော့်ဦးကြီးကတော့ “ရှင်အာပြဲ”လို့ ချစ်စနိုး ခေါ်တယ်။ ချစ်စနိုး ခေါ်မှန်းသိနေတော့ ဘာမှမဖြစ်ခဲ့ဘူး။ တချို့ကတော့ အဲဒီ့အချိန်မှာ “ကိုရင်”လို့ ခေါ်ကြတယ်။
ကြီးမှ သာသနာ့ဘောင် တစ်ခေါက်ပြန်ဝင်ပြီး ဒုလ္လဘ ရဟန်းခံတဲ့အခါ မှာလည်း ငယ်တုန်းက ဘွဲ့ကိုပဲ ပြန်ယူလိုက်တယ်။ သာသာနာ့ဘောင်မှာ သိရတဲ့ ဦးဇင်းတွေ၊ ကိုယ်တော်ကြီးတွေက “ကိုယ်တော်”တို့၊ “ဦးဇင်း”တို့နဲ့ ခေါ်ဝေါ် သုံးနှုန်း ပြောဆိုတာတွေလည်း ခံခဲ့ရဖူးတယ်။
သည်လိုနဲ့ နည်းနည်းကြီးလာတော့ သူငယ်ချင်းတွေက “ဟေ့ကောင်”လို့ ခေါ်တာမျိုးလည်း ခံဖူးတယ်။ နောက်ပိုင်းကျတော့ “မအေ…”တွေ၊ “နှမ…”တွေနဲ့ ခေါ်ဝေါ်သုံးနှုန်းတာမျိုး၊ “ငါ”နဲ့ တိုင်းထွာပြီး ခေါ်ဝေါ် သုံးနှုန်းတာမျိုးတွေလည်း ကြုံလာရတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း အခါခပ်သိမ်းတော့ စိတ်မဆိုးဖြစ်ပါဘူး။ သူက ခင်လို့၊ မင်လို့ ခေါ်တာမှန်း သိနေရင် စိတ်မဆိုးဖြစ်ဘူး၊ ကိုယ်နဲ့ သိပ်အစပ်မတည့်သူက ခေါ်ရင်တော့ စိတ်ဆိုးလား ဆိုးရဲ့၊ အဲဒီ့အခေါ်အဝေါ်လေးကြောင့်ပဲ ရန်ဖြစ်လား ဖြစ်ရရဲ့။
ကျွန်တော့် ပထမဆုံး ရည်းစားကတော့ ကျွန်တော့်ကို “ကို”တဲ့။ အမယ်… တယ် နားဝင်ချိုတာ ခင်ဗျ။ တချို့ကောင်မလေးတွေက “သူ”လို့ သုံးပြန်တယ်။ ဒါလည်း နားထောင်လို့ ကောင်းနေဆဲပါပဲ။ တချို့ကကျတော့ လည်း “ယူ”တဲ့။
နောက် ရည်းစားတစ်ယောက်ကကျတော့ “မောင်”တဲ့။ ဒါလည်း အနိပ်သား။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လည်း “ကို”တုန်းက တစ်“ကို”တည်း “ကို” ခဲ့ဖူးသလို အခုလည်း “မောင်”နေရတာ အမော။
သူငယ်ချင်းတွေထဲမှာလည်း “မင်း”လို့ ကျွန်တော့်ကို ရည်ညွှန်း သုံးစွဲသူတွေ ရှိသလို “ခင်ဗျား”လို့ စိုက်လိုက်မတ်တတ် ပြောသူတွေ ရှိတယ်။
မိန်းကလေးသူငယ်ချင်းတွေကတော့ “နင်”ပေါ့။ ဟုတ်နေတာပဲ။
အဲလိုပဲ၊ အသက်ကလေး ၂၀ နား နီးလာတော့ ကျွန်တော့်နာမည်ကို နာမည်ရင်းအတိုင်း ခေါ်သူတွေ ရှိသလို “ကို”တပ်ပြီးမှ ခေါ်သူတွေလည်း ရှိလာတယ်။ တစ်ချိန်ကျရင် “ဦး”တပ်ပြီး အခေါ်ခံရဦးမယ်ဆိုတာ အဲတုန်းကတည်းက ရိပ်စားမိခဲ့ပါတယ်။
မကြာပါဘူး၊ ကျောင်းပြီးစမှာ ကျူရှင်ဆရာ တက်လုပ်လိုက်တော့ ကျွန်တော့်ကို “ဆရာ”လို့ ခေါ်သူတွေ အလိုလို ပေါလာတယ်။ အဲသလို အခေါ်ခံရတာလည်း အတော်တော့ အရသာရှိသား။ နာမည်မှာလည်း “ဦး” ထည့်ပြီး အခေါ်ခံလာရတယ်။
မြန်မာစကား မတတ်တဲ့ နိုင်ငံခြားသားအစုံနဲ့ပတ်သက်ရတဲ့ အပျော်တမ်း အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကိုရောက်သွားတော့ ကျွန်တော့်မြန်မာနာမည်က ပြဿနာ။ သူတို့ခေါ်ရင် အမြီးအမောက် မတည့်ဘူး။ ခက်တာက ကျွန်တော်ကလည်း မြန်မာတန်မဲ့ အင်္ဂလိပ်နာမည်နဲ့ အခေါ်ခံရမှာကို မကြိုက်တတ်ဘူး။ ဒါနဲ့ ကျွန်တော့်နာမည်က အဖျားစာလုံးတွေကို ပေါင်းပေးလိုက်တယ်။ အော်ပီကျယ့်ကို အေပီကေလို့ခေါ်သလို ကျွန်တော့်ကိုလည်း “အေတီကေ”လို့ ခေါ်ကြဖို့ ပြောရတယ်။
သည်လိုနဲ့ ဂျပန်တွေ၊ အိန္ဒိယတွေ၊ အစ္စရေးတွေ၊ ဂျာမန်တွေ၊ ပြင်သစ်တွေ၊ အင်္ဂလိပ်တွေက ကျွန်တော့်ကို “အေတီကေ”လို့ပဲ ခေါ်ကြပြန်တယ်။ မေမေကလည်း ကျွန်တော့်ကို တစ်ခါတစ်ရံ “အေတီကေ”ပဲ ခေါ်တယ်။ အဲသလို “အေတီကေ”လို့ ခေါ်ကြတဲ့ နိုင်ငံခြားသားတွေထဲမှာ ကျွန်တော့်ထက် ငယ်တဲ့ ကလေးတွေတောင် ပါသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့လူမျိုး၊ သူရို့စရိုက်နဲ့မို့ ဘယ်လိုမှ မနေခဲ့ဘူး။
နောင်အခါ နိုင်ငံခြား အဖွဲ့အစည်းတွေမှာ အလုပ် လုပ်ဖြစ်သွားတဲ့အခါကျပြန်တော့ “အေတီကေ”က ဆက်တွင်နေတယ်။ သည်အခါမှာလည်း ကျွန်တော့်ထက် ငယ်တဲ့ မြန်မာတချို့က “အေတီကေ”ပဲ ခေါ်သလို တချို့ကကျတော့ “ကိုအေတီကေ”တဲ့။ ဒါပေမယ့် ဘယ်လိုမှ မနေခဲ့မိပြန်ဘူး။
တချို့ရည်းစားတွေက “အောင်”လို့ခေါ်တယ်၊ တချို့ကကျတော့ “ကိုကို” ဖြစ်လာတယ်။ တချို့က “မောင်။” အဲ… ရည်းစားနှစ်ယောက် တစ်ပြိုင်တည်း ထားမိတဲ့ အခါကျတော့ ပြဿနာက တက်ရော။ သူတို့ကို ခေါ်တဲ့ အခေါ်အဝေါ်တွေ လွဲကုန်တတ်သလို ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လည်း “မောင်”လိုက်၊ “အောင်”လိုက်၊ “ကိုယ်”လိုက် လုပ်နေရတာနဲ့ အယောင်ယောင် အမှားမှားတွေ ဖြစ်ကုန်ပါရောလား။ အဲဒီ့မှာတင် ပြဿနာတွေ အထွေးလိုက်တက်၊ ငိုတာ၊ ယိုတာ၊ ဆောင့်တာ၊ အောင့်တာ၊ ဖြတ်တာ၊ ကွဲတာတွေ ခံရတော့ တော်တော် မှတ်သွားတယ်။
သူတို့က ဘယ်လိုခေါ်ခေါ် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် “ကိုယ်”လို့ပဲ တစ်သမတ်တည်း သုံးသလို၊ သူတို့ကိုလည်း လူဘယ်လောက် ပြောင်းပြောင်း “ချစ်”လို့ တစ်သမတ်တည်း ခေါ်တော့ နောက်ပိုင်းမှာ အလွဲလွဲအချော်ချော်တွေ မဖြစ်တော့ဘူး။
စာရေးတဲ့အခါကျတော့ ကျွန်တော့်ကို “ကိုဆူဒိုနင်”လို့များ ခေါ်လိုက်ရင် ဘယ်လိုကြီးမှန်း မသိဘူး၊ ကိုယ့်ဘာသာ စိတ်ပေါက်ပေါက်နဲ့ ပေးချင်ရာ ပေးလိုက်တဲ့နာမည်မို့ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်က အဲဒီ့နာမည်ကို သိပ်သဘော မတွေ့လှတာအမှန်ပဲ။ ခက်တာက အဲဒီ့နာမည်ကမှ သွားအကျိုးပေးနေတယ်။ အဲတော့လည်း ကျွန်တော်ကြိုက်ကြိုက်၊ မကြိုက်ကြိုက် အဲသလို အခေါ်ခံရတာ ခေါ်သူမှာ အပြစ်မရှိပြန်ဘူး။
ပိုဆိုးတာက အခုနောက်ပိုင်း “အတ္တကျော်”ဆိုတဲ့ နာမည်ကို ခံယူမိတဲ့နောက်ပိုင်း ဆရာသုမောင်နဲ့ တွေ့တော့မှ ခွက်ခွက်လန်တော့တာ။ ကျွန်တော်က “ဆူဒိုနင်”ဆိုတဲ့ ကလောင်နာမည်ကို ကြိုက်လှတာ မဟုတ်ဘူး။ ဒါနဲ့ ကလောင်နာမည်အသစ် မွေးလိုက်တာ။ “အေတီကေ”လည်း မပျောက်ပျက်အောင် စဉ်းစားလိုက်တော့ “အတ္တကျော်” ထွက်လာတယ်။ အမယ်၊ သူ့ဟာနဲ့သူတော့ နာမည်လေးက လှသလိုလိုပဲ။ ကိုယ့်ဟာကိုယ်လည်း အတော်ကျေနပ်သွားတယ်။ အဲ… ဆရာသုမောင်နဲ့ တွေ့တော့ သူက ကျွန်တော်ကို ဘယ်လိုခေါ်တယ်မှတ်လဲ။ “ကိုအတ္တ”တဲ့ခင်ဗျ။ သွားပြန်ပြီ၊ နာမည်အမှည့် မှားပြန်ပြီဆိုတာ ချက်ချင်း သိလိုက်တယ်။
ရုံးမှာလည်း ရာထူးနိမ့်သူ မြန်မာဝန်ထမ်းတချို့က ကျွန်တော့်ကို “ဆရာ”လို့ ခေါ်တတ်ကြတယ်။ လြုံခံရေး တာဝန်ကျတွေ၊ သန့်ရှင်းရေး လုပ်သားတွေ၊ ယာဉ်မောင်းတွေက အဲသလို ခေါ်တာ များပါတယ်။
စာရေးသူဖြစ်လာတော့ “ဆရာ”အခေါ်ခံရတဲ့ နှုန်းထား ပိုစိပ်လာပေမယ့် ကျူရှင်ဆရာဘဝမှာ အသားကျပြီးသားဆိုတော့ “ဆရာ”အခေါ်ခံရတဲ့အတွက် ထူးပြီး မကြည်နူးမိတော့တာလည်း အမှန်ပဲ။ ဒါပေမယ့် ကလောင်နာမည်ကို အဖျားဆွတ်ပြီး “ဆရာဆူ”လို့ ခေါ်ရင်တော့ တော်တော် အီလည်လည်နိုင်ရပြန်တယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း စောစောကလိုပါပဲ၊ “ခေါ်သူမှာ အပြစ်မရှိဘူးဟဲ့”လို့ မိမိကိုယ်ကို ပြန်ဆုံးမရင်း နေလိုက်ရပြန်တယ်။
ကျွန်တော့်အိမ်သူကတော့ ကျွန်တော့်ကို “ကိုကြီး”လို့ ခေါ်တာများတယ်။ တစ်ခါတလေတော့လည်း “ကိုကို”တဲ့။ စကားပြောရင်တော့ ကျွန်တော့်လေကို လိုက်ပြီး “ညည်း”နဲ့ “ကျုပ်”နဲ့ ပြောလားပြောရဲ့။ “ရှင်”နဲ့ “ကျွန်မ”သုံးလားသုံးရဲ့။
ခွန်းကြီးခွန်းငယ်ဖြစ်ကြရင်တော့ “နင်”တွေ၊ “ငါ”တွေပါ ပါလာတတ် တယ်။ သူက ကျွန်တော့်ထက် ခုနစ်နှစ်ငယ်တော့ အဲလိုများ သူက သုံးလိုက်ရင် အသည်း ဆတ်ဆတ်ခါ နာမိသေးတယ်။ “တိရစ္ဆာန်မ၊ တော်တော် ရိုင်းတာပဲ”လို့ အောက်မေ့လား၊ အောက်မေ့ရဲ့။ (ကျွန်တော်က သူ့ကို ဖေတွေ၊ မောင်တွေ ကိုင်တုတ် ထားတာကျ တရားတယ်လို့ ထင်နေမိသဗျား။)
သမီးလေး မွေးပြီး သမီးနှုတ်က ပထမဆုံး ထွက်လာတဲ့စကားလုံးက “ပါပါး”တဲ့။ ကျွန်တော့်ကိုခေါ်တာ။ သမီးက “မေမေ”ဆိုတဲ့ စကားလုံးထက် အများကြီး စောပြီး “ပါပါး”ကို တတ်သွားတယ်။
ကျွန်တော့်ဘဝမှာ တစ်ခါမှ မမျှော်လင့်၊ မသုံးစွဲဖူးတဲ့ အဖေကို ခေါ်တဲ့ အခေါ်အဝေါ်ပဲ။ ကျွန်တော်က ကျွန်တော့်ကိုယ်ကျွန်တော် “ဖေဖေ”လို့ သုံးခဲ့ပေမယ့် သမီးက ကျွန်တော့်ကို “ပါပါး”လို့ ဘယ်သူမှ မသင်ဘဲ ခေါ်နေခဲ့တယ်။
အဲလိုနဲ့ ကျွန်တော့်ကို သမီးရော၊ သူ့နောက်မှ မွေးတဲ့ သားတော်မောင် မျောက်လောင်းလေးကရော “ပါပါးကြီး”လို့ ခေါ်ကြတယ်။ သူတို့ မအေကိုကျတော့ “မေမေ”တဲ့။ ဘာလဲ မသိဘူး။
အခု ခုနစ်နှစ်နဲ့ ကိုးနှစ်စီ ရောက်လာကြတဲ့အခါ “ဖေဖေ”လို့ ပြောင်းခေါ်ဖို့ သူတို့ကို စကား စကြည့်မိခဲ့ဖူးသေးတယ်။ နှစ်ကောင်စလုံးက ခါးခါးသီးသီးပဲ၊ ရယ်လို့ပဲ နေကြတယ်။ “မခေါ်နိုင်ပါဘူး၊ ပါပါးကြီးက ပါပါးကြီးပဲပေါ့”တဲ့။
အသက်ကလေးရလာတော့ တချို့လူငယ်လေးတွေက “ဦး”လို့ ခေါ် ကြပြန်တယ်၊ “အန်ကယ်”လို့ ခေါ်တဲ့သူကလည်း ခေါ်တယ်။ အခေါ်ခံရ ခါစတုန်းကတော့ နည်းနည်း ကျွဲမြီးတိုချင်သလို ဖြစ်မိခဲ့ရပေမယ့် နောက်ပိုင်းကျတော့လည်း ရိုးသွားတာပါပဲ။
တချို့ကတော့လည်း ယဉ်ကျေးသမှုအရ “အစ်ကို”လို့ ခေါ်တာမျိုးလည်း ခံဖူးတယ်။
ကြည့်စမ်း၊ အခုလို ချရေးလိုက်တော့ ကျွန်တော့်တစ်ယောက်တည်းကို နာမည်မျိုးစုံ၊ နာမ်စားမျိုးစုံနဲ့ အခေါ်ခံခဲ့ရတာတွေ၊ အခေါ်ခံနေရတာတွေ အများကြီးပဲ။
အမေတို့၊ အဖေတို့က “သား”လို့ မခေါ်ဘဲ နာမည်ရင်းအတိုင်း ခေါ်တဲ့အခါကျတော့ ရင်ထဲမှာ အောင့်တယ်။ “ခွေးကောင်”လို့ အမေတို့က ခေါ် လိုက်ပေမယ့် ချစ်စနိုး အခေါ်ခံရမှန်း သိနေပြန်ရင် ကျေနပ်တယ်။
သူငယ်ချင်းတွေက မင်းနဲ့ ငါနဲ့ ပြောလာရင်လည်း ဘာမှ မဖြစ်ဘူး။ သိပ်ကြီးလည်း မရင်းနှီး၊ ကိုယ်နဲ့လည်း မတိမ်းမယိမ်းက မင်းနဲ့ ငါနဲ့ ပြောလာရင်တော့ စိတ်က ကွက်ချင်တယ်။
သူငယ်ချင်းတွေက “မအေ၊ နှမ” ကိုင်ပြီး ပြောနေပြန်ရင်လည်း ဘာမှ မဖြစ်ဘူး။ ဒါပေမယ့် စိတ်အခန့်မသင့်တဲ့အခါမှာတော့ အဲဒါနဲ့တင် ထ ပြဿနာ တက်ရတာလည်း ကြုံဖူးတယ်။
တပည့်လေးတွေက “ဆရာ”ခေါ်တာရယ်၊ စာဖတ်ပရိသတ်က “ဆရာ”ခေါ်တာရယ်၊ ရေးဖော်ရေးဖက်ချင်းက “ဆရာ”ခေါ်တာရယ်၊ စားသောက်ဆိုင်စားပွဲထိုးက “ဆရာ”ခေါ်တာရယ်မှာ အလေးအပေါ့ချင်း ကွာခြားမှန်းကိုလည်း သတိထားမိနေတတ်ပြန်တယ်။
“ဆူဒိုနင်”ဆိုတဲ့ကလောင်နာမည်ကို ကိုယ့်ဘာသာ ပေးမိထားခဲ့ပေမယ့် အဲဒီ့နာမည်နဲ့ အခေါ်ခံရရင်ဖြစ်စေ၊ “ဆရာဆူ”လို့ ခေါ်ရင်ဖြစ်စေ နည်းနည်း မနေတတ်၊ မထိုင်တတ် ဖြစ်ချင်နေတုန်းပဲ။ နောက်ပိုင်း ခံယူတဲ့ အတ္တကျော်ကျလည်း “ကိုအတ္တ”သော်လည်းကောင်း၊ ”ဆရာအတ္တ”သော်လည်းကောင်း အခေါ်ခံရရင် နည်းနည်း ငုပ်သွားတယ်။
“အေတီကေ”ဆိုတာကိုကျတော့ ဘယ်သူက ခေါ်ခေါ်၊ ဘယ်အရွယ်က ခေါ်ခေါ် ဘာမှ မဖြစ်မိပြန်ဘူး။
ကျွန်တော့်အိမ်သူက “ကိုကို”ပဲ ခေါ်ခေါ်၊ “ညည်း”လို့ပဲ သုံးသုံး၊ “ရှင်”နဲ့ပဲ ပြောပြော၊ ဘာမှ မဖြစ်မိပေမယ့် “နင်”လို့ ပြောတဲ့အခါကျတော့ နည်းနည်း နင်သွားတယ်။
ကျွန်တော် စဉ်းစားကြည့်တယ်။ ကျွန်တော်တို့တွေဟာ ဘာဖြစ်လို့ အခေါ်အဝေါ်တွေကို စွဲလမ်းနေရတာလဲလို့။
တစ်ရက်မှာ ကျွန်တော်နဲ့ မကြာသေးခင်ကမှ ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်လာတဲ့ မိတ်ဆွေသစ် တစ်ယောက်က ဟိုးဆယ်နှစ်ကျော်လောက်က အလုပ်တစ်ခုမှာ သူ အဆင်မပြေခဲ့တဲ့ အကြောင်းကို ပြောပြတယ်။ အဲဒီ့အလုပ်မှာ သူ့ထက် ၁၀ နှစ်ကျော် ငယ်တဲ့ မြန်မာမိန်းကလေးတစ်ယောက်က သူ့ကို “ကို” မတပ်၊ “ဦး” မပါဘဲ သူ့နာမည်ရင်းအတိုင်း ခေါ်ခဲ့တာကို တော်တော် ရိုင်းတယ်လို့လည်း သူက မှတ်ချက်ပေးတယ်။
ကျွန်တော်နဲ့ အဲဒီ့မိန်းကလေးနဲ့လည်း တစ်မိုးတည်းအောက်မှာ အတူ အလုပ်လုပ်ခဲ့ဖူးတယ်။ အသက်အရွယ်အရ သူက ကျွန်တော့်ထက် ဆယ်နှစ်လောက် ငယ်တယ်၊ ရာထူးအရလည်း သူက ကျွန်တော့်အောက် သုံး၊ လေးဆင့် နိမ့်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အဲဒီ့ကလေးမက ကျွန်တော့်ကို နိုင်ငံခြားသားများ ခေါ် သလို “အေတီကေ”လို့ပဲ တွင်တွင် ခေါ်ခဲ့တယ်။ ကျွန်တော့်စိတ်ထဲမှာ ဘာဆို ဘာမှ မဖြစ်ခဲ့မိဖူးဘူး။ သူ ရိုင်းတယ်၊ မြန်မာတန်မဲ့နဲ့ သက်သက်မဲ့ လူဝါးဝတယ်လို့လည်း တစ်ခါမှ မတွေးမိခဲ့ဖူးဘူး။ သူနဲ့ ကျွန်တော်နဲ့ ဆက်ဆံရေးမှာလည်း အဖုအထစ်တွေ မဖြစ်ခဲ့ဘူး။ ခိုင်းစရာရှိ ခိုင်းလိုက်၊ နောက်စရာရှိ နောက်လိုက်၊ ပြောင်လိုက်၊ စိတ်ဆိုးစရာရှိ ဆိုးလိုက်နဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်၊ မိသားစုဝင်ချင်း ဆက်ဆံသလို ဆက်ဆံနိုင်ခဲ့တယ်။
သည်ကနေ့ အဲဒီ့ရုံးမှာ ကျွန်တော်အလုပ် မလုပ်တော့ပေမယ့် မကြာခဏတော့ ဆုံဖြစ်နေသေးတယ်။ သူ အကူအညီလိုရင် တောင်း၊ ကျွန်တော် လိုရင်လည်း တောင်း၊ အပြန်အလှန် ဆက်ဆံဖြစ်ရင်လည်း ခါတိုင်းအတိုင်းပဲ သူက ကျွန်တော့်ကို “အေတီကေ”ပဲ ခေါ်တယ်။ ကျွန်တော့်စိတ်ထဲ ဘယ်လိုမှကို မနေခဲ့ဘူး။
ကျွန်တော့်မိတ်ဆွေကတော့ အဲဒါကိုပဲ ယိုးမယ်ဖွဲ့ပြီး သည်ကလေးမအပေါ် မကြည်မလင် ဖြစ်နေတာကို ကြားလိုက်ရတော့ ကျွန်တော့်စိတ်ထဲမှာ သည်မေးခွန်းက ပေါ်လာတယ်။ ကျွန်တော်တို့တွေဟာ အခေါ်အဝေါ်တွေကို ဘာလို့ သည်လောက်တောင် စွဲလမ်းနေရတာလဲလို့။
အခေါ်အဝေါ်ထက် သဘောထားက ပိုအရေးကြီးတယ်လို့ ခံယူလိုက်ရင် ကိစ္စပြတ်တာပါပဲ။
“မအေ၊” “နှမ”နဲ့သော်လည်းကောင်း “ခွေးတိရစ္ဆာန်”လို့သော်လည်းကောင်း အခေါ်ခံရပေမယ့် ခေါ်သူက ကိုယ်နဲ့ တရင်းတနှီးလည်း ရှိတယ်၊ ကိုယ့်စိတ်နဲ့ အစပ်တည့်သူလည်း ဖြစ်နေတယ်၊ ရယ်ရယ်မောမော၊ ပြောဆိုနေရင်း ခေါ်တာမျိုးဆိုရင် အခေါ်ခံရသူက ဘာမှမဖြစ်ဘူး။
ဒါပေမယ့် “ဟေ့ကောင်”လို့ ခေါ်တာလေးလောက်ပေမယ့် ခေါ်သူက ဒေါသနဲ့ ခေါ်တာဖြစ်စေ၊ အကျောကြီးနဲ့ ခေါ်တာလို့ဖြစ်စေ အခေါ်ခံရသူမှာ ခံစားရပြီဆိုတာနဲ့ တစ်ပြိုင်နက် နားခါးသွားတတ်စမြဲပဲ။
အဓိကကတော့ ကိုယ်က ဘယ်နှလုံးသားမျိုးနဲ့ နာယူသလဲဆိုတာပါပဲ။ အခေါ်ခံရသူရဲ့စိတ်က အေးချမ်းတည်ငြိမ်မှုနဲ့ နာယူလိုက်ရင် ဘယ်လို ခေါ်ခေါ် ဘာပြဿနာမှ မရှိတော့ဘူး။ အခေါ်ခံ ရသူရဲ့နှလုံးက မငြိမ်းချမ်း ရင်တော့ “ဆရာသမား”လို့ ခေါ်တာကိုပဲ ကိုယ့်ကို “ရိ”တယ်လို့ တွေးမိနိုင်ပါတယ်။
တကယ်လည်း “ရိ”ပြီး ခေါ်တာမျိုးရှိတယ်။ ကျွန်တော့်ကို ခေါ်တဲ့ အထဲမှာ “ဇာတ်လိုက်”ဆိုတဲ့ အခေါ်အဝေါ်မျိုးဟာ တစ်ခါတစ်ရံ ခပ်ရိရိ ခေါ်တာမျိုးပါ။
ကျွန်တော်တို့ ရုံးက ကျွန်တော့်ရဲ့ မိတ်ဆွေရင်းကြီး ကိုထူးခြားကတော့ လူတကာကို “အန်ကယ်”ခေါ်တဲ့ ဝါသနာနဲ့။ သူ့အသက်က ကျွန်တော့်ထက် လေး၊ ငါး၊ ခြောက်နှစ်ကြီးပေမယ့် ကျွန်တော့်ကိုလည်း “အန်ကယ်”လို့ပဲ ခေါ်ဝေါ်သုံးနှုန်းတယ်။
သူနဲ့ အနေကြာလာတော့ ကျွန်တော်လည်း သူ့လိုပဲ လူတကာကို “အန်ကယ်”တစ်လှည့်၊ “ဦးလေး”တစ်လှည့် ခေါ်လိုက် လုပ်နေတယ်။
စာပေလောက ဦးမျိုးညွှန့်ကို “အန်ကယ်”လို့ ခေါ်မိတော့ ပထမပိုင်း သူ့ခမျာ အခံရ ခက်နေပုံရတယ်။ လူရည်လည်တဲ့သူမို့လို့သာ စိတ်မဆိုးတာ။ သူက ကျွန်တော့်ထက် ဆယ်နှစ်သာသာ ကြီးပေမယ့် အဲလိုအခေါ်ခံရတာတော့ ဘယ်ကြိုက်ပါ့မလဲ။
ဒါပေမယ့် ကျွန်တော့်ထက် ဆယ်နှစ်ကျော်ငယ်တဲ့ သူ့သား ကိုနေမျိုးညွန့်(အလင်္ကာဂျာနယ်)ကိုလည်း ကျွန်တော်က “ဦးလေး”လို့ ခေါ်တာမို့ နောက်ပိုင်းမှာ သူ သဘောပေါက်သွားပုံ ရတယ်။ ကိုနေမျိုးညွန့်ကလည်း လူပါးပဲ။ လူချင်း ဆုံတာနဲ့ သူက ကျွန်တော့်ကို “ဦးလေး၊ ဦးလေး”ဆိုပြီး သူက ဦးအောင် ခပ်စိပ်စိပ် ခေါ်ထားတတ်ပြန်တယ်။
ကျွန်တော်တို့ချင်း ခင်နေတော့ ဘာမှ မဖြစ်ဘူး။ ဘယ်လို ခေါ်ခေါ်၊ ဘာ ပြဿနာမှ မရှိဘူး။ “မောင်နေမျိုးညွန့်နှယ်၊ သက်သက်မဲ့ နာမ်နှိမ်နေရန်ကော”တွေ၊ ဘာတွေ တစ်ခါမှ မစဉ်းစားဖြစ်ဘူး။
နောက်တစ်ခုကိုလည်း ကိုယ်တွေ့ ကြုံဖူးထားတာ ရှိသေးတယ်။ အဲဒါကတော့ ကျွန်တော်တို့ရုံးမှာ စီမံခန့်ခွဲရေးအရာရှိတစ်ယောက် ရှိတယ်။ သည်လူက စီမံခန့်ခွဲရေးနဲ့ အုပ်ချုပ်ရေးကို တာဝန်ယူရတော့ အင်မတန် အမုန်းခံရရှာတယ်။ ဝန်ထမ်းဆိုတာတွေကလည်း မတစ်ရာသားများပီပီ စီမံအုပ်ချုပ်သူကို စိန်ခေါ်သလို လုပ်တဲ့ ပျက်ကွက်မှုအစုံ၊ ကျူးလွန်မှုအစုံကို လုပ်တတ်ကြတယ်။
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ရုံးမှာ အောက်ခြေဝန်ထမ်း အားလုံးက သူ့ကို ရိုရိုသေသေ ဆက်ဆံကြတယ်။ “ဆရာ၊” “ဆရာ”နဲ့ တစ်“ဆရာ”တည်း “ဆရာ”နေလိုက်ကြတာ သူတို့အစား အမောသား။ အဲ… တစ်နေ့ကျတော့ လုံခြုံရေး တာဝန်ကျ ဝန်ထမ်းနှစ်ယောက် သူတို့ချင်း ပြောနေတာကို အမှတ်မထင် ကြားလိုက်တယ်။ အဲဒီ့ စီမံခန့်ခွဲရေး အရာရှိကို သူတို့က ကွယ်ရာမှာ “နွားကြီး”လို့ ခေါ်ဝေါ် ရည်ညွှန်း သုံးစွဲနေကြတာကလား။
ကျွန်တော် အတော်သဘောကျသွားတယ်။ ကျွန်တော့်ကိုလည်း ကွယ်ရာမှာ သူတို့ခေါ်ချင်သလို ခေါ်ကြမှာပဲ၊ ရှေ့တင်တော့ “ဆရာ”က တစ်ပြားဖိုးမှ မလျော့စေရဘူး။
အဲဒါထက်စာရင် ကျွန်တော့် ရှေ့မှာလည်း ကျွန်တော့်ကို ဆရာမခေါ်ဘဲ “အေတီကေ”လို့ နာမည်တပ်ခေါ်၊ ကျွန်တော့်ကွယ်ရာမှာ ကျွန်တော့်ကို ရည်ညွှန်းတဲ့ အခါမျိုးမှာလည်း “အေတီကေ”လို့ပဲ ရည်ညွှန်းတဲ့သူမျိုးက ရှေ့တင် “ဆရာ”ခေါ်ပြီး ကွယ်ရာမှာ ခေါ်ချင်သလို ခေါ်နေတဲ့သူတွေထက် စာရင် အပုံကြီး သာပါသေးလားလို့ တွေးမိရပါတယ်။
ဆိုလိုတာက အခေါ်အဝေါ်ထက် သဘောထားက ပိုအရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပါ။ ကျွန်တော်တို့တွေက အခေါ်အဝေါ်(ပညတ်)တွေကို အစွဲလမ်း လွန်နေတယ်လို့ တစ်ခါတစ်ခါ တွေးမိတယ်။
အဲဒီ့ကနေ ဆက်တွေးမိတာက သိုးဆောင်းဆိုရိုးစကားလေး တစ်ခုပါ။ “နှင်းဆီပန်းကို ဘယ်လိုနာမည်နဲ့ ခေါ်ခေါ်၊ မွှေးမြဲ မွှေးနေမှာပါပဲ”လို့ ဘာသာပြန်လို့ ရမယ် ထင်ပါတယ်။
ဟုတ်ပါရဲ့။ ကျွန်တော့်ကိုလည်း ဘယ်လို ခေါ်ခေါ်၊ ခေါ်ချင်သလိုခေါ်၊ ကျွန်တော်က ကျွန်တော်အဖြစ်ကနေ ရွေ့လျောသွားမှာမှ မဟုတ်တာ။ ခေါ်သူက “နွားကြီး”လို့ ခေါ်လိုက်တာနဲ့ ကျွန်တော် နွားဖြစ်သွားမှာ မဟုတ်သလို ခေါ်သူက “မအေ”နဲ့ ကိုင်တုတ်ပေမယ့် သူ ပြောတဲ့ဘဝကို ရောက်သွားတာမှ မဟုတ်တာ။ အဲဒါကိုမှ ကျွန်တော်က လိုက်လှုပ်ခတ်နေမိရင် ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင်က သဘောထား မမှန်ရာကို ရောက်သွားနိုင်တယ်ဆိုတာကို တွေးမိလာရတယ်။
အခုနောက်ပိုင်းတော့ ဘယ်သူက ဘယ်လို ခေါ်ခေါ်၊ ဘယ်လိုသုံးသုံး ဘာမှမဖြစ်မိတော့တာ များတယ်။ ဒေါသနဲ့ ခေါ်ရင်လည်း ခေါ်သူရဲ့ဒေါသကို နားလည်ပေးလိုက်ရင် သိပ်မလှုပ်ခတ်တော့ဘူး၊ မစ္ဆရိယနဲ့ ခေါ်ရင်လည်း ခေါ်သူရဲ့ မစ္ဆရိယကို သတိထားလိုက်မိရင် ဘာမှမဖြစ်ချင်တော့ဘူး။
ပါရမီခံ ရင့်သန်လွန်းလှလို့ မဟုတ်ပါဘူး။ တရားတွေ ဘာတွေ ပေါက်တဲ့အဆင့်ကိုလည်း မရောက်နိုင်သေးဘူး။ ဒါပေမယ့် သဘောထားလေး နည်းနည်း မှန်သွားတာနဲ့ နေရထိုင်ရတာ ပိုမို ပေါ့ပါးလာတာတော့ အမှန်ပဲ။
အစတုန်းက ထိတိုင်း သိနေ၊ သိတိုင်း ထိနေမိသမျှ အခုကျတော့ အဲဒါတွေဟာ ဘာမှ သိပ်အရေးမကြီးမှန်း သတိထားမိသွားတာနဲ့အတူ ဘာမဟုတ်တာလေးတွေနဲ့ ကိုယ့်စိတ်ကိုကိုယ် အညှိုးမခံဖြစ်တော့ဘူး။
သေချာစဉ်းစားကြည့်လေ၊ သည်အချက်က ထင်ရှားလေလေပဲ။
တစ်နေ့မှာ ၂၄ နာရီ ရှိတယ်။ အိပ်ချိန်က ပျမ်းမျှ ရှစ်နာရီ ထား။ သိစိတ်နဲ့ နေနေတဲ့အချိန်က တစ်နေ့မှာ ၁၆ နာရီ ရှိတယ်။ အလုပ်လုပ်တဲ့ အချိန်က တစ်နေ့ကို ရှစ်နာရီ၊ အလုပ်သွား အလုပ်ပြန်အတွက် အချိန်ယူရတာက နှစ်နာရီ၊ သုံးနာရီလောက် ရှိတယ်။ ဆိုတော့ တစ်နေ့မှာ အလုပ်အတွက်အချိန်က ဆယ်နာရီ၊ ၁၁ နာရီလောက် ရှိနေတယ်။ တစ်နေ့တာမှာ ကိုယ်တွက် သက်သက်ကျန်တဲ့ အချိန်က တကယ့်တကယ် လေး၊ ငါးနာရီလောက်ပဲ ရှိတော့တာ။ အဲဒီ့အချိန်လေးမှာ သူများက ပြောလိုက်တာ၊ ဆိုလိုက်တာ၊ ခေါ်ဝေါ်၊ သုံးစွဲ၊ တိုင်းထွာလိုက်တာလေးတွေကို တနုံ့နုံ့ တွေးရင်း ဘာ မဟုတ်တာတွေနဲ့ ဦးနှောက် အရှုပ်ခံနေဖြစ်တဲ့အချိန်တွေက တစ်နာရီလောက်လေးပဲ ရှိနေတယ်ဆိုဦးတောင် နှမျောစရာကြီးရယ်။
လက်တွေ့မှာ ကျွန်တော်တို့ လူသားတွေဟာ အဲသလို ဘာမဟုတ်တာတွေနဲ့ပဲ စိတ်ကို အရှုပ်ခံဖြစ်နေတဲ့ အချိန်တွေကိုက သေချာတွက်ကြည့်မယ်ဆို မနည်းလှဘူး။
ကျွန်တော်တော့ အသက်ကြီးလာလို့လားမသိဘူး၊ အချိန်ကို နှမျောတတ်လာတယ်။ ကိုယ်နဲ့ မတိမ်းမယိမ်းတွေ၊ ကိုယ့်ထက်ငယ်တဲ့သူတွေ တဖြုတ်ဖြုတ် ကြွေနေတဲ့အချိန်မှာ ကိုယ်က အသက်ရှင်ခွင့် ရနေတာလေးကိုပဲ ကျေးဇူးတင်လှပြီ။ ဘယ်လောက်အထိ ဆက်ရှင်နေဦးမယ်ဆိုတာလည်း သေချာတဲ့ကိစ္စ မဟုတ်တော့ အချိန်ကို အလွန်နှမျောနေမိရတယ်။
အဲလို နှမျောတာနဲ့အတူ ဘာမဟုတ်တာတွေနဲ့ စိတ်အရှုပ်ခံ၊ ဦးနှောက် အခြောက်ခံပြီး အချိန်ြုဖန်းမနေချင်တော့ဘူး။ ဒါနဲ့ သဘောထားမှန်မှန်နဲ့ နေမိအောင် မိမိကိုယ်ကို ကျင့်ယူနေမိတယ်။
သဘောထားမှန်လေလေ၊ နေရထိုင်ရတာ ပေါ့ပါးလေလေဆိုတာကိုလည်း စာတွေ့မဟုတ်ဘဲ ကိုယ်တိုင်သိ သိလာရတယ်။
ကျွန်တော်တွေးမိသလောက်ကို ပြန်ဖောက်သည်ချလိုက်တာပါ။ စာဖတ်သူများလည်း စဉ်းစားကြည့်ပါဦး။
(၁၉၉၉ ခုနှစ် မတ်လထုတ်Fashion Image မဂ္ဂဇင်းမှာ ဖော်ပြခဲ့ပြီး စာမူခွင့်ပြုချက်အမှတ် ၄၀၀၉၅၉၀၅၀၉ နဲ့ လက်တွဲဖော်စာအုပ်တိုက်က ၂၀၀၆ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလမှာ ဒုတိယအကြိမ်အဖြစ် ထုတ်ဝေထားတဲ့ “တွေးတောဆင်ခြင်မှု အနုပညာ”စာအုပ်ထဲက တစ်ပုဒ်ကို ပြန်လည်တင်ဆက်လိုက်တာပါ။)
Author lettwebawPosted on4May 20104May 2010 Categories Reproduction, Thoughts
4 thoughts on “Should you know how to cope with name-calling”
4 May 2010 at 1:31 pm
I used to address my boss by his Surname until he insisted that I call him by his First name and that without “Mr.” I hesitated for several times but tried calling him by his first name and noticed that the communication becamealot warmer and closer.
I’ve seen people address my dad very respectfully in his sight and call him ဆိုက်ကားသမား out of his sight.
And yes, you’re right. By which name they call doesn’t matter, it’s about with which attitude they address us.
4 May 2010 at 2:44 pm
I do not like it when my dad call me full name. Which mean I did something wrong.
7 May 2010 at 5:15 pm
သဘောထားမှန်လေလေ၊ နေရထိုင်ရတာ ပေါ့ပါးလေလေဆိုတာ…အမှန်ပဲ ဘကြီး
Maw maw lwin says:
19 December 2012 at 2:30 pm
ကျွန်မကတော.ဆူဒိုနင် အဖြစ်စဖတ်ဖူးတာ။ အစကမင်းသားကြီးအောင်လွင်ထင်မိသေးတယ်။၀င်းဦးအကြောင်းတွေရေးလို.
Previous Previous post: Dream of Teens 1
Next Next post: Qualifications Necessary for A Nice Partner